Hiran State - News: HS:-Godoomiyaha gobolka Hiiraan oo waji gabax kala kulmay cuqaasha Hiiraan
HS:-Godoomiyaha gobolka Hiiraan oo waji gabax kala kulmay cuqaasha Hiiraan
HS:-Inkasta oo aanu bulshada dhawaan u soo bandhigi doono 5ta qofood ee lataliyaha u ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo dhamaantood ku kala sugan qurbaha iyo waliba wadanka UAE magaaladiisa Dubai magacyadooda hadane waxaa muhiim ah amaba lagama maarmaan ah in shacabka loo iftiimiyo wajigabaxa siyaasadeed ee uu maanta cuqaasha Hiiraan kala kulnay gudomiyaha gobolka Hiiraan oo intii uusan Mogidishuka soo bixin dhawr jer so wacay qaar qucaasha Hiiraan ka mid ah maadaama ay la socdeen safiirka dalka jabouti u fadhiya Soomaaliya, abwaaka caanka ah Sangub iyo wasiirka gaashaandhiga mr Fiqi.
Marka taariikhda Hiiraan iyo sidii loo soo dhaweyn jiray waftiyada dib loo eego ma jirin oday ka mid ah nabadoonada rasmigaa iyo cuqaasha Hiiraan oo maanta waftigan soo dhaweeyey mr Laqanyo aad ayuu u dareensan yahay.
Marka laga soo tago ururka dhalinyarada Hiiraan oo rag iyo dumar kooban iskugu keenay wadooyinka waxaa la dhihi karaa gudoomiye Laqanyo jawaabtii ku habooneyd wuu helay maadaama ay iaga iyo wasiirka qeyaadka ku af celiyeen cuqaasha oo siweyn u dhalilay hananka ay dowladan u shaqeyso.Taariikhda lama hayo gudoomiye sidan deg degtaa cuqaasha Hiiraan galsooni ugu waaya Laqanyo ka hor.
La soco xogtii oo dhameystiran walow cuqaasha Hiiraan ku faraxsan yahiin dabaal degyada la filayo in ay dhacaan berito iyo beridanbe.
Sidoo kle dad badan ayaa ku jahwareersan aqoonta Gudomiye Laqanyo maadaama ay dadna ugu yeeraan Colonal ciidan intii aan xlka loo magacaabina ay qar bulshada ka midah sheegeen in uu aqoonyahan yahay. sidoo kale maadaama aanu horey u soo bandignay gudomiyayaashii hore dadka hagi jiray amaba la talin jiray dhawaan filo magacyada iyoshaqsiyaadka Mr Laqanyo lataliyayasa u ah kedibna fshilka de degaa iyo iney isaga iyo cuqaasha isku dacaa waxii keenay isweydii...
· admin on June 25 2013 13:36:20 · 0 Comments · 2044 Reads ·
14,934,308 unique visits